WOWOW Faucet Connector Hofu Yechikadzi
musha / zvishongedzo / Faucet accessories / WOWOW Pombi Inobatanidza Hose Mukadzi Mukadzi
faucet mvura mutsetse zvokubatanidza zviri nyore kuisa uye inogona nyore kubata nemunhu mumwe. Iyo yakavakirwa-in-drain vharuvhu ine yakasimba uye kwete nyore kurema.
Braided mvura mutsara discription:
Inokodzera bhesheni pombi uye kicheni pombi, kune ese anopisa & anotonhora mvura uchishandisa.
cUPC Certified tucai mitsara: yakarukwa nylon yekumusoro pevhu, PX yemukati hose, goridhe yakapetwa kaviri-musoro nati, yakasimba yendarira inobatanidza.
Saizi Yakakura yeUS: M10 * 1, 9/16, 500 mm / 19.7 inch pakureba, 11 mm mune yekubatanidza dhayamita, kurongedza mushe uye zvine simba kuona mhando
Kuiswa nyore: yakasimba yendarira yekubatanidza, nyore kuiswa nemaoko kana wrench muminiti.
5-GORE garandi, Kasitoma SERVICE: 5-gore garandi uye rutsigiro rwevatengi runopihwa. Yakafukidzwa nemazuva makumi mapfumbamwe ekudzoka mahara.
RUDZIDZA KUSVIRA EMAIL❤service@wowowfaucet.com
Unhu hwacho hwakanyatsonaka, ruvara rwakachena uye rwakanaka, chitarisiko chiri nyore, uye kutakura kwacho kuri muchadenga. Mapfundo acho akatsetseka, akakobvu, akagadzirwa zvakanaka, hapana mabhureki, goridhe rakanaka, diki uye rakajeka dhizaini, uye dhizaini yacho yakanaka kwazvo Iyo mhizha inotaridzika kunge yakanyanya-kuguma. Iyo screw cap inoshongedzwa neye booster mubato, iyo inonyanya kuve nyore kuisa. Inogona kusimbiswa pasina wrench, inonyanya kushandisa-ushamwari!
Kicheni faucet hoses kazhinji inofanirwa kutanga yagadzirisa zvikamu zvehuputi nemapurasitiki erabha, inobvoora gomba-rinotonhora remvura kubva kumusoro kusvika kuzasi, wozoshandisa gomba rekuvharira kuvhara iyo tapombi yepasi pezasi faucet nenguva uye Iko kubatana kwakasimba uye kwakasimba, uyezve isa banga kumugumo wehose wachi kuenda kune yekubatanidza pazasi pefeucet.
SKU: X1004 Categories: zvishongedzo, Faucet accessories Tags: Pombi Inobatanidza, Faucet Connector Hesi, Pombi Faipi
WOWOW Bronze Goridhe Towel Hook
WOWOW Bronze Goridhe Bathroom Towel Bar
WOWOW Kicheni faucet Sprayer Musoro G1 / 2 Bronze ...
WOWOW Stainless Simbi faucet Kubata Matte Nhema ...